मगलवार, असार १०, २०७६ ११:२३:४१
सन २०१९ मा स्याटलाइट उडाउने गृहकार्यमा
शुक्रवार, आश्विन ५, २०७५ न्यूजमिसाइल
हरेक वर्ष असोज १ लाई नेपालमा विज्ञान दिवसको रुपमा मनाउँने गरिन्छ । यो वर्षपनि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) ले विज्ञान दिवस मनाएको छ ।
राष्ट्र कै प्रतिष्ठित निकाय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) हो । हाल यस निकायले कत्तिको अर्थपूर्ण रुपमा कार्य गरिरहेको छ ? र तीनै विषयमाथि नाष्टका प्रविधि संकाय प्रमुख, रविन्द्र प्रसाद ढकालसँग भेषराज पाण्डेको विशेष कुराकानी :
उपकुलपतिको कार्यअवधी सकिसके पश्चात् करिव एक महिनादेखि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान उपकुलपति विहिन छ,कामहरु कसरी चलिरहेका छन् ?
उपकुलपति नहुँदा कामकाजमा केही फरकपना त आएको नै हो तर काम नै नभएको चाहिँ हैन ।
किन यति ढिलाई भएको होला नियुक्तिमा ? कि कतै आफ्ना मान्छेहरुलाई भित्रभित्रैबाट मिलाउने काम पो हुँदै हो कि?
यो नियुक्ति गर्ने काम सरकारले गर्छ । ढिलाई हुनुको पछाडी प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताले गर्दा हुन सक्छ । ढिलाई भएर भए पनि अब्बल कार्यदक्षता र क्षमता भएको व्यक्ति आए केही हुदैन ।
असोज १ गते विज्ञान दिवस नाष्टले नै अायाेजना गरेको कार्यक्रममा धेरै नै कम युवाहरु तथा मानिसहरुकाे उपस्थिति हुनुले देशका शिक्षित नागरिक विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रबाट विछिप्त भएका हुन् अर्थात् उनीहरुलाई आकर्षित गर्न नसकिएको हो ?
त्यो दिन उपस्थिति कम हुनुको पछाडी सरकारले अन्तिम समयमा मात्र कार्यक्रम गर्ने निर्णय गर्नु हो । तपाईले भने जस्तै अझै पनि नेपालीहरुको मानसिकता के देखिन्छ भने विज्ञान प्रविधिमा रहेर गर्न सकिने के नै छ र ? समय खर्च गर्नु हुदैन भन्ने सोचाई राख्नेहरु नेपालमा बढी भएर हो ?
कैयौं अब्बल युवा अनि उच्चस्तरका प्राध्यापकहरु पनि गुनासो छ नि कि नास्टले राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई प्राथमिकतामा राख्छ भन्ने । यो हुँदा त क्षमता भएकाहरुमा नै वितृष्णा जागृत हुने भयो नि हैन र ?
काम गर्नेलाई गर्न नदिने र कुरा काट्नेहरुको कमी यहाँ छैन । चाहना मात्र नभई क्षमता भएकाहरुलाई काम गर्न नाष्टमा वातावरण छ । यो भन्दैमा सरकारले वजेट कम दिएको हुँदा क्षमता भएजति सबैलाई ठाउँ दिन भने नसकिएको नै हो ।
यसका वावजुद पनि तपाईहरु अन्तरिक्ष यान बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
समय सङ्गै चल्न सक्नु पर्छ । त्यसैले हामी २०१९ मा स्याटलाइट उडाउने गृहकार्यमा छौं ।
सरकारले बजेट छुट्याउँदैन भन्नुहुन्छ तर स्याटलाइट उडाउने गृहकार्यमा छौ भन्नुहुन्छ,यो कसरी सम्भव छ ?
हामीले एकदम न्यनतम लागतमा जम्मा दुई करोडमा यो काम गर्दैछौं ।
पहिलो प्रयास हो, भए राम्रो हुन्छ नभए अभ्यास अनि अनुभव हुन्छ । त्यसको लागि हामीले नेपाली वैज्ञानिकहरुको ज्ञान र सीपको प्रयोग गर्छौ, यदि हामी नसक्ने अवस्थामा पुग्यौं भने मात्र वाहिरी मान्छेलाई बोलाउने हो, त्यसैले सम्भव हुनेमा हामी ढुक्क छौँ ।
विभिन्न कामको नाममा सरकारी बजेट स्वाहा पार्ने परिपाटी लामो समयदेखि चल्दै आएको देखिँदा कतै तपाईहरु पनि त्यही बाटोमा पो लाग्नु भएको हो कि, आसङ्का गर्नेहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
देशभक्तिको भावना भएका र भ्रष्टाचार हुनु हुदैन भन्ने हामी भएकाले त्यस्ता आसङ्का गर्नु उपयुक्त छैन ।
दैनिकी छाक टार्न धौ धौ पर्ने नेपालीहरु धेरै हुनुहुन्छ । उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने प्रविधि पो भित्र्याइनु पर्छ भन्ने आलोचकको पनि कमी छैन नि ?
आलोचकहरुको कुरा नगर्नुस् किनकि यो काम नगर्ने हो भने दुनियाँ अरु ग्रहमा पुग्ने बेलासम्म पनि हामी केही गरेका छैनौ भन्ने र गर्दा पनि किन गरेको भन्नेहरु भन्दै जान्छन् । तर देशको अवस्थालाई हेर्दै समयानुकूल अघि बढेमा मात्र देश विकास सम्भव छ ।